Kuendesa email kuinbox kunoenderera kuve chiitiko chinoshungurudza chemabhizimusi ari pamutemo sezvo spammers vachiramba vachishungurudza nekukuvadza iyo indasitiri. Nekuti zviri nyore kwazvo uye zvakachipa kutumira email, spammers vanogona kungo svetuka kubva kusevhisi kuenda kusevhisi, kana kunyatso script yavo yega inotumira kubva kuseva kuenda kuseva. Internet vanopa rubatsiro (ISPs) vakamanikidzwa kuratidza vanotumira, kuvaka mukurumbira pakutumira IP kero nenzvimbo, pamwe nekutarisa padanho rega rega reemail kuyedza kubata vatadzi.
Zvisinei kuti iwe wavaka yako sevhisi, uri pane yakagovaniswa IP kero, kana yakatsaurwa IP kero… zvakakosha kuti uone yako inbox kuiswa. Uye, kana iwe uchinge wave kutamira kune mutsva webasa mupi uye kudziya IP kero, kuongorora kwakanyatso kuita nzira yekuona kuti mameseji ako ari kuonekwa nevateereri vako.
Rudzi rweMbeu Kuedzwa - inoenzanisirwa neakanakisa maitiro anoshandiswa neemail nyanzvi, InboxAware's inbox yekuisa yekumisikidza inoita kuti vashambadzi veemail kuti vaone uye kukurira kwechokwadi mafirita uye misungo ye spam inogona kumisa maemail ako usati warova tuma.